Shacabka Degaanka Somalida oo ku Qulqulaya Moqdishu – Rasaasa News
May 5, 2014 degaanka, ku, Moqdishu, oo, Qulqulaya, Shacabka, somalida
Jijiga, May 5, 2014 – Magaala madaxda Somaliya ee Muqdishu, ayaa la sheegay in ay maalin walba soo galaan shacab Somali ah oo tira badan, kuwaas oo ka soo hayaamaya degaanada Somalida.
Dadka imanaya Muqdishu ayaa u imaada siyaabo kala duwan, iyaga oo is leh waxaad ka heli kartaan fursado wanaagsan.
Wariyaha Muqdisho uga soo warama RasaasaNews, wuxuu sheegay in dad badan oo u dhashay Degaanka Somalida Ogadeeniya, ay imanayeen bilihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho. Dadkan ayaa isugu jira dad hore Somaliya degaan ugu lahaa iyo kuwa aan waligood arag.
Dadka ka imanaya degaanka Somalida Ogadeeniya, oo intooda badan ka imanaya magaalada Jijiga, ayaa sheegay in ay xamili waayeen cadaadiska jira degaanka Somalida ee Atoobiya.
Muqdishu oo ay dagaalo sokeeye ka jireen 23 sano oo xidhiidh ah, ilaa haatana aan amaankeeda la isku halayn karin ayey door bideen shacabka Somalida ee ka soo cararaya Atoobiya.
Muqdisho, ayaa la saadaalinayaa in ay noqon doonto, sidii ay bari ahaan jirtay iyo si ka wanaagsan. Laakiin runtu waxay tahay nimaan dhul lahayn meel walba oo wanaagsan waa ku gooman yahay.
Baarlamanka Somaliya ayaa dhawaan ansixiyey sharci hore u jiray oo ruux Somaliga ah u hiilinaya, iyada oo aan loo eegin reer iyo degaan midna. Sharcigaa oo ah in “dukumintiga Somaliga ah waxaa qaadan kara ruux kasta oo Somali ah isaga oo aan lagu xidhin wax aqoonsi ah.”
In Somaliya iyo dadka Somalida ahba ay wanaag iyo dawladnimo helaan, waa wax ruux walba oo Somali ah jelaan karo. Laakiin, dadka Somalida Ogadeeniya waxaa deeqi kara oo kaliya ama ay ku dhargi karaan Ogadeeniya oo xor ah.
Karaamardha Hospital: Gabadh u Dhimatay Taws Liyuu Boolisku Gaadhsiiyey.